Umakhalekhukhwini we-Blu Studio 6 HD | Kusuka kuLinux
IBlu Studio 6.0 HD iyifabhethi engamasentimitha ayisithupha enezici ezinhle kakhulu uma kubhekwa inani layo.
La brand Blu Ibilokhu ithola indawo eningi eLatin America nase-United States, ikwazile eminyakeni embalwa ukudala ama-smartphones amahle kakhulu afana neBlu Life 8 kanye neStudio 6.0 HD.
Izici ze- Umakhalekhukhwini we-Blu Studio 6.0 HD njengoba sishilo zihle kakhulu uma ubheka intengo yazo. Inesikrini esingu-6-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-720 x 1280, lokhu kusho ukuthi yi-HD, kodwa-ke, isinqumo siyalingana namanye amaselula amancane, lokhu kusho ukuthi kuzoba namaphikseli amaningi nge-intshi ezikrinini ezincane ngalokho esingabona imininingwane eminingi, ngamanye amagama isikrini esincane sizobukeka singcono futhi sinesinqumo esifanayo.
Iprosesa ye- Umakhalekhukhwini we-Blu Studio 6.0 HD I-quad-core ku-1.3Ghz, lokhu kwanele ngobuningi bezicelo ezitholakalayo, ngisho nemidlalo edinga kakhulu, ngokuya nge-RAM sine-1GB nesitoreji sizoba ne-4GB kuphela okufanele ukhiphe kuyo isikhala esisetshenziselwe uhlelo, kunesikhala sememori se-SD sememori engama-32GB.
Igumbi elikhulu le- Umakhalekhukhwini we-Blu Ngama-megapixels ayi-8 kanti ikhamera engaphambili ingama-megapixel ama-2, womabili amakhamera mahle kakhulu futhi ungathatha izithombe ezinhle ngawo. Ibhethri alikhiphi, liyi-3000 mAh, eqinisekisa ukushaja okungaphezu kosuku olulodwa ngaphandle kwezinkinga.
Uhlelo olusebenzayo yi-Android 4.2 elithuthukiselwa ku-4.4.2 Kitkat. Yena Intengo yeBlu Studio 6.0 HD Kuyi-pesos engu- $ 3,399, kuyintengo enengqondo ngokucabangela izici enazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ifoni ye-Blu Studio 6 HD